प्रदेश राजधानी पोखरा : कोरोना संक्रमण फैलिएको हो ?::Nepali News Portal from Nepal
प्रदेश राजधानी पोखरा : कोरोना संक्रमण फैलिएको हो ?
पोखरा, ८ जेठ – केहीसमय अघिसम्म पोखरा महानगरपालिकाले महानगर ‘कोरोनामुक्त’ रहेको दाबी ग¥यो । विदेशबाट फर्किकाहरुमा संक्रमण नदेखिएको र संक्रमित जिल्लाबाट आउन रोक लगाइएको आधारमा महानगरले यो दाबी गरेको थियो ।
महानगरकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले पनि महानगरको वरिपरी महामारी आइसके पनि महानगरमा भने विपत्त नआई सकेको बताएकी थिइन् । तर, बुधबार एक्कासी महानगरका ४ कर्मचारीमा आरडिटी टेस्ट गर्दा कोरोना पोजेटिभ भेटिएको खबरले तरगिंत बनायो । आरडिटी टेस्ट उतिसारो भरपर्दो नभएकोहुँदा पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आउने सोचेर महानगरवासिलाई केही राहत त मिल्यो । यद्यपि, एक जनाको रिपोर्ट पिसिआर विधिबाट पुन ः परिक्षण गर्दा पनि पोजेटिभ नै आइदियो ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले आफ्नो परिक्षणमा विश्वास नलागेर उनको स्वाब पुन ः परिक्षण गर्दैछ । जसको रिपोर्ट बिहीबार मात्रै आउँछ । मंगलबार स्वास्थ्य र सरसफाईका ५१ कर्मचारीलाई आरडिटी टेस्ट गर्दा ४ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि ससंकित बनेको महानगरलाई बुधबार पिसिआर विधिबाट परिक्षण गर्दा पनि रिपोर्ट शंकास्पद निस्किएपछि थप त्रास थपेको छ । केही समयअघि स्वास्थ्य निर्देशनालयले आरडिटी विधिभन्दा पिसिआरमै बढी भरपर्ने र आरडिटी टेस्ट बन्द गर्ने समेत बताएको थियो । तर, महानगरका कर्मचारीको आरडिटीबाट टेस्ट गरियो ।
स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीका प्रमुख डाक्टर विनोदविन्दु शर्माका अनुसार बुधबारको टेस्ट रिपोर्ट शंकास्पद भेटिएका महानगरका कर्मचारीको पुनः परिक्षणका लागि स्वाब संकलन पनि भइसकेको छ । उनको रिपोर्ट बिहीबार मात्रै सार्वजनिक हुने टेलिफोन वार्तामा उनले बताएका छन् । ‘उहाँको स्वाब फेरि लिनुपर्ने देखियो । त्यसको लागि स्वाब संकलन पनि भइसकेको छ’, उनले भने । पुन ः परिक्षणमा रिपोर्ट सकारात्मक आउनेमा उनी आशावादी छन् । रिपोर्ट शंकास्पद आएका महानगरका कर्मचारिको स्वाब नै कम्प्लिट नभएको हुनसक्ने उनको तर्क पनि छ । ‘त्यो पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ किनभने त्यसको स्वाब कम्प्लिट छैन’,उनले अघि सुनाए ।
मंगलबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित सातै मन्त्री र मन्त्रीका सचिवालय सदस्य, सातै मन्त्रीका सचिव, प्रमुख सचिव तथा कर्मचारी, चालक र सुरक्षाकर्मीको पनि स्वाब संकलन गरिएको थियो । ११ जेठ देखि सुरु हुने प्रदेशसभाको वर्खे अधिवेशनमा भाग लिनु पर्ने भएकाले जाँच गर्न लागिएको मन्त्रालयले बताएको थियो । बुधबार सभामुखसहितको स्वाब संकलन गरिएको छ ।
बुधबार, आउने भनिएको कर्मचारी तथा मन्त्रीहरुको रिपोर्ट सार्वजनिक भई सकेको छैन । आरडिटी टेस्टमा शंकास्पद भेटिएका हुनाले तत्कालको लागि आरडिटीमा पोजेटिभ देखिएकाहरुको परिक्षण गर्न लागेको हुँदा मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीहरुको रिपोर्ट सार्वजनिक नभएको निर्देशक डाक्टर शर्माले जनाए । ‘तपाईंले चिन्तै नगर्नुस् त्यसमा, उहाँहरु सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ’, उनले भने । सबैको रिपोर्ट बिहीबार सार्वजनिक हुने उनले सुनाए ।
पोखर महानगरले जम्माजम्मि ३ सय बेड क्षमतको क्वारेन्टाइन खडा गरेकोमा वडावडामा पनि क्वारेन्टाइन क्षमता विस्तार गर्न लागेको छ । पिसिआर विधिबाट पनि शंकास्पद रिपोर्ट निस्किएपछि महानगरबासीमा थप संशय पैदा गराएको छ ।